Inotyisa Turkey Wildfires Inokonzeresa Vashanyi Kubuda muAntalya nzvimbo yekutandarira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Turkey Kuputsa Nhau » Inotyisa Turkey Wildfires Inokonzeresa Vashanyi Kubuda muAntalya nzvimbo yekutandarira
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Turkey Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kutsamwa kweTurkey moto wemoto kunokonzeresa kubuda kwevashanyi muBodrum neMarmaris
Dunhu reAntalya nenzvimbo dzaro dzinozivikanwa dzemahombekombe dziri kutyisidzirwa nemoto wakakura unoisa pangozi vashanyi uye vagari munzvimbo dzekushanyira muSouthern Turkey.
Moto wakaipisisa muBodrum neMarmaris, Turkey
Kubuda kwakarairwa muTurkey resort maguta eBodrum neMarmaris.
Moto wesango unopisa padhuze nedzimba nemahotera.
Turkish Navy iri kutora chikamu mukurwisa moto wesango.
Moto weTurkey wakarova maguta ekushanyira eMarmaris uye Pasi. Zviremera zvemunharaunda zvakaraira kuti vabudise vashanyi nevagari vemunharaunda.
Moto wakatanga kubuda mudunhu rine vanhu vashoma makiromita makumi manomwe nemashanu (75 mamaira) kumabvazuva kweAntalya, rinozivikanwa guta rekushanyira rinonyanya kufarirwa nevashanyi veRussia nevamwe vekumabvazuva kweEurope, asiwo maGerman.
Asi ivo vaikambaira padhuze neChina kumahombekombe ane jecha ane mahotera nenzvimbo dzekuchengetedza.
Mifananidzo pasocial media neTurkey TV yakaratidza vagari vachisvetuka kubva mumota dzavo uye vachimhanyira hupenyu hwavo kuburikidza nemigwagwa yakazara neutsi yakavhenekerwa nemarimi eorenji.
Nekuda kwemoto une simba, vanhu vakatanga kuburitswa muMarmaris.
Sango rinopisa padyo chaizvo nedzimba nemahotera.
Vamwe vashanyi vanoramba vachitamba bhora pamhenderekedzo yegungwa, zvisinei nemoto
Gurukota reTurkey rezvekurima uye Masango Bekir Pakdemirli akati maherikoputa mashanu, ndege imwe, uye mota dzemoto makumi matatu vari kurwisa moto une njodzi munzvimbo iyi.
Moto mutsva unoonekwa mudhorobha reBodrum. Vanhu vari kubviswa. Zvikwata zveTurkey Navy zvinobatanidzwa mukuedza kwakasimba kuchengetedza moto.
Moto wazvino, iwo akasimba kwazvo mumakore achangopfuura, akatanga nekuda kwemhepo inopisa mudunhu iri. Parizvino, vanhu vana vafa munjodzi iyi uye zana nemakumi masere nematatu vakatambura neutsi.
Pakutanga, Gurukota rezvekushanya kuTurkey Mehmet Nuri Ersoy akati moto waidzoka kubva kumahotera nedzimba.
Gurukota rakati: "Sezvo kupindira kwakaitwa nenguva uye nekushandiswa kwemidziyo yakawanda, kupararira kwemoto kumahombekombe kwakadzivirirwa. Gare gare, migwagwa yaienda kunzvimbo dzevashanyi yakavharwa. ”
nhasi, Pasi ndiyo imwe yenzvimbo dzakakosha kwazvo dzekutengesa, hunyanzvi, uye varaidzo sezvazvaive kubva mazana emakore apfuura… Iri guta riri mumhenderekedzo yegungwa umo hupenyu hwetsika uye hwazvino uno hunobatana mukubatana kukuru kunovhura maoko avo kune avo vanoda kuzivana. naye uye murarame.